Fandroahana ny kofehy AR - NAB Show News avy amin'ny Broadcast Beat, Broadcast ofisialy NAB Show - NAB Show LIVE
Mametraka VR, Video Volumetric amin'ny fomba famerenana
Ny famoronana dia azo aparitaka… Tsy artifisialy
Ny ambany indrindra dia mitovy amin'ny fahafaham-po amin'ny mpijery avo kokoa, Churn mpanjifa ambany
Famantarana avy amin'ny indostrian'ny M&E dia afaka mifehy, mampita ny fitoviana
Afaka mamindra kitapo tadiavinao ny AVOD… Ao anatin'izany ny doka
Mamorona hoavy tena misy ho an'ny fiara Autonomousse ny indostria
Fanararaotra mahavariana ao amin'ny sehatry ny indostrian'ny votoaty
Raharaha rahampitso, Mobilisation finday dia momba ny Data fa tsy Technology
5G dia miatrika fanamby bebe kokoa, fahafahana bebe kokoa amin'ny M&E
Ny vola azo avy amin'ny tsikombakomba Tsy azo mendrika mihoatra noho ny tena orinasa
Ny fantsona dia nandoa lalana ho an'ny dokambarotra mahomby kokoa, ny fandraisana ny doka
Miaraka amin'ny antsasaky izao tontolo izao an-tserasera, ny tsiambaratelo dia mety ho fisaintsainana mahafinaritra
Ny fahasamihafana dia manamboatra tantara kely kokoa ho an'ny olona, ​​ny olona sy ny fandaminana
Ny Media Streaming dia tena mampanantena fa hahavita ny asa ny tsirairay
Ny indostrian'ny votoaty dia ao anatin'ny antenantenan'ny fanatanjahantena, fiovana goavana
Home » Content Creation » Manala ny fonjan'ny AR
Manala ny fonjan'ny AR
By Phil Ventre, Fanatanjahantena VP ary Broadcast, Ncam
Raha ny zava-misy ho an'ny fandefasana dia mbola eo amin'ny sehatra somary somary mifangaro, ny fampiasany dia miala amin'ny sehatra 'kilalao vaovao' mahavariana; Nanjary ampahany manan-danja amin'ny votoatin'ny fandaharana ny grika AR, ary ny mpijery manan-danja dia mitaky sary sokitra be dia be sy azo itokisana izay alefa tanteraka ao anatin'ny tontolo misy.
Ny sehatry ny haino aman-jery ara-panatanjahantena manokana dia nanakitra sary momba ny AR hanatsarana ny programa. Amin'ny studio fandefasana, ny fanamby dia ny fampisehoana sary tahaka ny angon-drakitra ara-panatanjahantena ary antontan'isa amin'ny fomba vaovao sy mamorona; miaraka amin'ny teknolojia fanaraha-maso tsy fahita firy toa an'i Ncam Reality, afaka mamela ny mpanolotra ato amin'ny studio izy ireo hiseho mivezivezy manodidina ny mpilalao iray amin'ny làlan'ny golf ary afaka atolotry ny atleta 'teleport' mihitsy aza izy ireo. sary manaitra hyper-realistic.
Iray amin'ireo fetra farany niatrika ny fanaraha-maso fakan-tsary tao amin'ny tontolon'ny fampitana mivantana dia mandeha amin'ny fomba tsy mitombina. Ny vahaolana AR dia nanana ny fakantsary sy ny sensor sensor namahana ny angona tontolo iainana niverina tany amin'ny mpizara rindrambaiko tamin'ny alàlan'ny tariby teteza; raha toa ka tsara ho an'ny asan'ny studio sy ny toerany voafetra ao amin'ny OB, voafetra ho an'ny fandaharana mivantana famoronana kokoa.
Rehefa nanantona anay tamin'ilay hevitra ny CBS Sports mba hametrahana sary an-tsary mivantana eo amin'ny kianja ao amin'ny Super Bowl, ny fanamby dia ny fanaovana ny fitateram-baovao ataonay amin'ny alàlan'ny RF avy amin'ny basy Steadicam eo amin'ny lampihazo mankany amin'ny kamiao. Mila nahita fomba hanafahana ny fakan-tsary izahay, ahafahan'ny hetsika fakantsary mandeha mikoriana mavitrika amin'ireo mpilalao.
Ny vahaolana dia ny fametrahana ny bara sensor ho amin'ny rigera Steadicam RF toy ny mahazatra, fa tsy fametrahana ny fika ho any amin'ny mpizara Ncam lehibe, ny solosaina mini dia soloina. Na dia nijanona hatrany teo amin'ny Steadicam rig aza ny solosaina dia mora lavitra sy mora nentin'ny mpanampy iray afaka hijanona eo akaikin'ny mpandraharaha Steadicam ary hivezivezy ilay rindrambaiko eo an-toerana. Ny famantarana RF dia azo averina an-tariby ho any amin'ny kamiao mpamokatra.
Ary koa ny RF Steadicam izay nihazakazaka teo afovoan'ny saha alohan'ny lalao, ny CBS Sports dia nametraka roalahy roa hafa Ncam AR namboarina: Steadicam wired dia napetraka teo amin'ny GameDay Fan Plaza (studio an-tokotany ivelany manoloana ny kianja Mercedes Benz), raha Technojib iray hafa misintona eo an-tsaha. Ny sary rehetra dia noforonin'ny The Future Group.
Ny zava-drehetra dia niasa tsara tamin'ny andro ary ny fampitana izany dia fahombiazana lehibe, ary misy fiantraikany lavitra noho ny tranga tokana any Atlanta - na dia hetsika iray mampinono aza dia jeren'ny olona an-tapitrisany eran-tany.
Nanomboka teo dia niara-niasa tamin'ny ekipa R&D izahay tany amin'ny mpaninjara sy orinasan'ny famokarana, nizara ny drafitr'izy ireo sy ny sarobidintsika hanatsarana ity teknolojia ahafahan'izy ireo hanao bebe kokoa amin'ny AR. Amin'ny alàlan'ny fanaovana ny solosaina mpizara ho kely kokoa sy maivana kokoa, ny mpandraharaha fakan-tsary dia afaka mitondra azy ireo samirery, manome azy ireo fahafahana malalaka kokoa. Ho fanampin'izany, ny rafitra fanaraha-maso fakan-tsary tsy dia misy fahazoan-dàlana dia mamela ny mpanao gazety hampiasa AR amin'ny saika sehatra rehetra, na an-trano na any ivelany, satria manangona teboka voajanahary ao amin'ny tontolo iainana izany fa tsy mila miankina amin'ny marika napetraka.
Mifanaraka, ny fisian'ny 5G dia napetraka mba hanana anjara toerana lehibe amin'ny fomba ampitana ny fanatanjahantena. Ny BT Sport no lohalaharana amin'ity teknolojia vaovao ity, ary nahomby tamin'ny famandrihana mivantana ny famokarana mivantana lavitra an'i 5G tato anatin'ny volana vitsivitsy. Ny ekipa mpamokatra dia ho afaka haka sary mivantana mivantana miaraka amina fahitana miadana, na aiza na aiza avy amin'ny hetsika ara-panatanjahantena - ny bus bus, ny tonelina, ny miorina, afovoan'ilay pitch - manome talenta lehibe kokoa noho ny taloha ny talen'ny orinasa.
Ampio ny sary AR tsy misy dikany amin'ny famokarana, ary mahavariana ny fahalalahana famoronana ankehitriny.
Raha ny fanatanjahantena no mpamily fiara amin'ireo teknolojia ireo, dia hahazo tombony amin'ny hetsika mivantana ihany koa izy ireo (alao sary an-tsaina ny Swingometer izay mipetraka ivelan'ny 10 Downing Street!) Mankany amin'ny fampitana vaovao lehibe.
Amin'ny alàlan'ny fanokafana ny mety hisian'ny zava-misy marina sy ny fanaraha-maso fakan-tsary tsy dia misy vata be dia be no jerena, dia hahita mpamoaka vaovao maro isika handray ny fahafaha-manao izay azo tratrarina.
Inona no azon'ny fampielezam-peo avy any Hollywood - Desambra 9, 2019
Esports Shapeshifting miaraka amin'ny NewTek sy NDI® - Desambra 9, 2019
Ny Universite Sail University dia miara-miasa amin'ny tamba-jotra TVU mba hanomezana fahefana ny taranaka manaraka ny fanatanjahantena - Desambra 3, 2019
fampitana injeniera fampitana Engineering Graham Chapman navoaka ho an'nyEditor Spears & Arrows Video injeniera	2019-08-06
Previous: Ny Pixel Power dia manampy ny mpanjifan'ny famindrana ho an'ny vahaolana amin'ny rindrambaiko miaraka amin'ireo mpitarika mialoha ny varotra sy ny fametrahana tetikasa
Next: Ny vokatra TSL dia manolotra fivoarana farany amin'ny sehatra vaovao fanaraha-maso SAM-Q Audio amin'ny IBC 2019
TOROHEVITRA FAMPISEHOANA - CINEMA / FAMPIANARANA VIDEO
FIKAROHANA ARA-BAIBOLY Production
Cinematographer & Mpamoaka lahatsary na mpaka sary / Mpanatontosa
Broadcast injeniera - Mpanao
Adobe After Effects Adjunct